Date My Pet » Kufamba nemotokari yako dzinovaraidza
Last updated: Nov. 28 2020 | 5 Maminitsi verenga
Munoziva vachida kuendawo – saka wadii muvabvise?
Iva nechokwadi chokuti mhuka dziri utano, kuronga kushanya chete Vet wako, Vandudzai chero kwepfuti zvakakodzera. Vamwe Hotels ikozvino zvinoda kuti iwe kuratidza uchapupu hwokuti wako dzinovaraidza kuti bara chinyorwa rikaparadzirwa.
Iva nechokwadi kuti ndivape Mabatirwo nhata uye tick mushonga sezvo dzimwe nzvimbo anogona nemadandemutande pamwe inda uye Zvikwekwe. A Mabatirwo heartworm mushonga Zvinokurudzirwa kubva umhutu zvinogona kutapura dzinovaraidza yako.
Check zvinhu zvavo: (kurongedza zvose hwechipfuwo wako dziri muhomwe imwe duku apo unogona kuwana pairi)
A leash uye chipika, chipfuwo zita Tag (tinotarisira ine nhamba dzorunhare pairi uko munhu achapindura, nhamba pafoni iguru).
water, uye mvura dhishi (yokungazodzoka nekwaiitwa anoita Musateura)
A zvinosimbisa hwechipfuwo kwavo zvokudya, rupiza uye zvichida chipunu, uye regai kukanganwa tsauri
A dzinovaraidza bhuracha, bhabhadzira Shampoo kana uri kuenda waenda vhiki kana kupfuura
A toyi kana vaviri, uye chinhu kwavari avate.
Usakanganwa zvavo mishonga:
Tweezers chokubvisa cheek
Eye kuchenesa madonhwe
A dzinovaraidza mupimo mudziyo (kufanana kuchengeteka bhandi rako chete dzinovaraidza)
Mupurasitiki nokuti Atora pashure yenyu dzinovaraidza.
Fudzai kwenyu dzinovaraidza chiedza kudya maawa akawanda usati chekubva ndapfeka navo usati watanga rwendo venyu kufamba refu.
Chinhu chokutanga kuziva paunoitirwa motokari chirwere ndechokuti 95% nyaya iri kunetseka chokuita kwete chitsungo anoritsanangura. dzinovaraidza Your unganzwa mumotokari rwendo pamwe rokubviswa pamba yaro yokutanga, kana nzendo kuti Vet kana kuipa, ari usamo. saka, yayo Hazvishamisi kuti zvakazoitika Vatasvi mumotokari anofanira anonyandura simba zvikuru mupfungwa uye hunotevedzana mumuviri kunotevera.
Re-chirongwa wako dzinovaraidza Maonero kune kufamba mumotokari. Tsvaga paki pamusoro 5-10 maminitsi pamusha, Zvakanakisa kuva mumwewo ari mumotokari zvakare, adzikamise imbwa uye kanganisa naye kubva chokufambisa. Ramba iye anofara zvose inoenda paki. Apo Park kuita zvose rinonakidza zvinhu kuti imbwa anoda, titore bhora, uye kudzinga vanhu Frisbee. Mutsigiro Park haafaniri kuva kuti refu…. sezvo kunakidze sezvinobvira. Zvadaro kutyaira imbwa pamba rakanyorovera pake yose nzira zvakare uye kana musha kuti paine kupikisana kwakadaro sezvakanga zvikuru rembwa sezvamakaita panguva paki. Kupedza chidzidzo chake kudya kana vaenzi kana nguva uye mamiriro mvumo.
Zvino dzinovaraidza rako zvino kuwadzana motokari okufamba mafaro nguva.
Travel pamusoro chinhu. Kuti ipfungwa yakanaka kuti varege kufudza dzinovaraidza yako matanhatu nemasere maawa vasati vatanga mugwagwa rwendo. Kuva usina chawadya ndichamuita kashoma kuti kukanda mapfumo, uye kana asingazvinatsi kurwara, hapana zvokudya mumarutsi, saka zvinenge zviri nyore kuchenesa. Kupa dzinovaraidza mvura yako, zvisinei, havazogari kukanganisa dumbu rake uye kuti vamuite nyore.
Kana kuiswa kota-tangi. Nepo dzimwe mhuka dzinovaraidza kufamba zvakanaka usina chawadya, vamwe vachanzwa kudekara pashure kudya chiduku kudya. Vamwe dzinovaraidza chete vanoda zvokudya zvishomanana kwavo mudumbu kubatsira muvadzivirire usarware.
Tora kakawanda zororo hwatsvuka. Nepo dzimwe mhuka dzinovaraidza anogona kufamba kwemaawa asingadembi matambudziko, vamwe vanotanga kuwana queasy pashure makiromita mashomanana. Kuziva kwako dzinovaraidza kuti muenzaniso uye kumisa kanenge ose awa kana maviri kutora kukurumidza kufamba kubatsira dzinovaraidza wako kuwana ake nyika-makumbo shure. Zviri uyewo pfungwa yakanaka kudira kwaari mvura shoma, sezvo arege sokuti kunwa kana ari mumotokari.
Iva kumusoro-mberi naye. Hapana kufamba sezvo zvikuru pamberi motokari sezvo kumashure, saka zvingakubatsireyi dzinovaraidza yenyu kana iwe kumurega atasve pachigaro kumberi, asi iva nechokwadi chokuti ivo vari doggy seatbelt kana chiduku usamo kuti simbi dzemabhande emabhurukwa kupinda chigaro.
Wedzera horizons ake. Pets, sezvinoita vanhu, kashoma kuwana carsick apo vanogona cherechedzai unopfuura girl.
Crank pasi mahwindo. Fresh mhepo kwakanakira munhu ari kunzwa zvishoma carsick, kusanganisira imbwa yenyu kana katsi, asi regai kuzarura hwindo zvakakwana saka anogona kutiza kana kuwana ake nzira musoro.
Edza bhaisikopo waizoita. Dimenhydrinate (Dramamine) — chete zvinodhaka vanhu kutora kuti tidzinge motokari chirwere — uyewo anoshandira dzinovaraidza. Svikiro imbwa huru dzinofanira kupiwa 25 kuti 50 milligrams pamusoro Dramamine kanenge awa asati parwendo, katsi nembwa duku vanofanira kuwana pamusoro 12.5 milligrams. Iva nechokwadi kuti bvunza Vet wako usati kupa kwako dzinovaraidza chero somushonga chigadzirwa.
NOKUGADZIRIRA CAR RAKO
kusika nzvimbo dzinovaraidza wako anogona kuchovha zvakanaka uye vachiri kuona panze nepahwindo, uye kukwanisa kubatwa nemi. Vakagara pamakumbo ako paunenge uchityaira haasi yakanakisisa pfungwa. Vachamanikidza vanoda kuwana mvura yavo uyewo.
Gumbeze kana nyoro inovaraidza mubhedha vaizova guru saka vanofunga pamba.
Regai kukanganwa mupimo mudziyo, haudi navo achibhururuka kuburikidza windshield kana uine kumisa pakarepo.
Kana katsi yako kufamba nemi kuti nzvimbo Kitty nemarara. Zvinokonzera chigaro mberi anoita zvakanaka mune dzimwe motokari. First akarara pasi chidimbu repurasitiki (mumwe marara bhegi achaita).
ROKUFAMBIRA pasi HIGHWAY
Kazhinji dzinovaraidza renyu vachavimba kurara mapfumbamwe muzana nguva apo havasi akatarisa nepawindo kana kuwana dzinovaraidza kubva kwamuri.
Unofanira kumisa ose 2 kuti 3 maawa kuti Fido kutambanudzira makumbo ake.
HAKUNA Vasiyei IN THE CAR
mota Modern dzinenge mhepo zvakasimba uye chipfuwo akasiyiwa moga mumotokari iri pangozi haana kuwana mhepo yakakwana, kana kutambura kupisa. Kunyange zvazvo mhepo tembiricha iri chete 70 madhigirii motokari muzuva kunogona ripise kwazvo.
Husiku A Motel
Tinovimba iwe Akaongorora Pet Travel paIndaneti uye wakawandirwa chipfuwo kuhotera ushamwari kana praia paIndaneti. Kana hotera / praia akapa chipfuwo muripo kubhadhara, Havaedzi kuvanza dzinovaraidza yako, imi achapedza usiku hwose kunetseka kuti yakawanikwa.
Kana wasvikapo bvunza kuti pasi uriri kamuri pedyo imwe nharaunda umo unogona kufamba Fido. Muzinda chivanze haisi nzvimbo yakakodzera. Iva nechokwadi tonotora pashure Pet kuitira kuti hotera / praia icharamba Pet ushamwari.
pokugara Most vanobvunza kuti urege kusiya mhuka ndoga mumba nezvikonzero pachena. Ungafanira arayire tora panze kana mumba basa, kana akadzikama zvokuti dzinovaraidza renyu kusiyiwa mumotokari kuti hafu yeawa kana kuti unogona kuenda kuzodya uye muvabate pamwe. Ungatowana chipfuwo resitorendi ushamwari, tsvaka nzvimbo Outdoor zvigaro nzvimbo yakaita nzira cafes.
Wasvika AT rwendo RAKO
Ratidza dzinovaraidza yako pamba wavo mutsva, apo iwe waisa zvokudya zvavo, mvura, uye mubhedha.
Kana dzinovaraidza wako ari katsi, kuvaratidza nzvimbo Kitty nemarara bhokisi. Fido vanofanira kuziva kwaanobva zvinofanirwa kuenda uyewo.
ikozvino muri vakagadzirira kunakidzwa pazororo yako pakati peboka shamwari yako yepamwoyo.
13 Winter Date Ideas nokuda Risingakanganwiki Experience